Indasitiri yeKutaurirana - Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.
Nekushandisa CNC maturusi emuchina, maindasitiri ekugadzira nekugadzira nyika yangu ari kusimukira nekukurumidza, uye zvinodikanwa zvehuwandu, kunyatsojeka, uye kushanda zvakanaka kwezvikamu zvekugadzirisa zviri kuramba zvichikwira nekukwira, uye kudiwa kwezvikamu chaizvo mundima dzakasiyana kuri kuwedzerawo. . Kubva pakuona kwezvikamu zvekugadzirisa, kugadzirisa kwe disc-shaped thin-walled parts kwakaoma kudarika zvimwe zvikamu zvakajairika. Kunyanya, kugadziridzwa kweiyo chaiyo disc-yakaumbwa porous zvikamu zvinoda yakakwirira kurongeka uye maitiro akaomarara. vakawanda. Kuti ive nechokwadi chekurongeka kwemuchina wezvikamu, zvinodikanwa kusarudza yakakodzera muchina chishandiso uye kuona sainzi uye inogoneka yekugadzirisa nzira uye tekinoroji, kuitira kugadzirisa uye kugadzira zvikamu zvakaringana zvinosangana nezvinodiwa.
Precision disc-yakaita porous zvikamu zvine zvakakwirira zvinodikanwa pakurongeka, izvo zvakaoma kusangana neakajairwa muchina maturusi uye maitiro ekugadzirisa. Uyezve, zvikamu zvitete-walled disc-shaped parts, zviri nyore kuremara panguva yekugadziriswa, izvo zvinoita kuti kukwana kwese kudikanwa kuve kwakanyanya uye kunetsa kugadzirisa Naizvozvo, mukuwedzera pakusarudza yepamusoro-inoshanda muchina chishandiso uye kumisikidza chirongwa chesainzi chekugadzira tekinoroji. , kusarudzwa kwezvigadziriso uye clamping mauto anofanirwa kuve akaiswa zvakanyanya. Mushure mekuedzwa kwakawanda uye kugadziridzwa, seti yakazara yezvirongwa zvekugadzirisa yakawanikwa. Iwo masampula ebvunzo akasangana nezvinodiwa zvekugadzirisa, uye kugona kwechirongwa chekugadzirisa kwakatemwa.
I. Kusarudzwa kwemichina yekushandisa uye kutsunga kwekugadzirisa nzira
Mushure mekuenzanisa uye kuongororwa, muchina wekubatanidza unofinha une yakakwirira-chaiyo coordition yekumisikidza mudziyo uye yakanaka kuomarara yakasarudzwa kuita mabasa ekugadzira. Ichi chishandiso chemuchina chine kuita kwakanakisa mukugaya ndege uye aperture machining. Iyo indexing nzira inosarudzwa pakugadziriswa kwechikamu maburi. Iyo yakakwirira-chaiyo indexing disc-mhando yedhijitari yekuratidzira turntable inoiswa patafura yemidziyo yemuchina, uye zvikamu zvinogadziriswa paturntable, kuitira kuti nzvimbo dzakasiyana dzezvikamu zvakagadziriswa zvinongoda kutenderera turntable.Kana uchigadzira gomba reiyo chikamu, iyo turntable inoramba yakagadziriswa. Kuiswa kweturntable kunokosha zvikuru. Nzvimbo yekutenderera yezvikamu uye nzvimbo yekutenderera yeturntable inofanira kuchengetedza huwandu hwepamusoro. kukanganisa kwe indexing kunofanirwa kudzorwa mukati mechikamu chidiki zvakanyanya sezvinobvira.
II. Processing nzira
Kubva panzira yekuita, machining eiyo chaiyo disc-yakaita porous zvikamu haina kunyanya kusiyana nemamwe marudzi ezvikamu. Nzira huru ndeiyi: kugadzirwa kwakashata → kurapwa kwekuchembera kwechisikigo → kupedzisa → kurapa kuchembera kwepanyama → kupedza → kupedza. Kugadzira kwakakasharara ndiko kucheka nekukuya buri rechikamu, chigayo chakakasharara nekuboora mukati nekunze kwemukati, uye mativi ese echikamu, uye rough kuboora buri, uye kuboora kwekunze kwechikamu. Semi-kupedzisa inoshandiswa semi-kupedzisa pamusoro pemukati nekunze madenderedzwa kuti asangane nehukuru hunodiwa, uye iyo miviri migumo inopedzwa semi-yapedzwa kusangana nehukuru hunodiwa. Makomba uye ekunze denderedzwa grooves ari semi-apedza kufinha. Kupedza ndiko kushandiswa kweakakosha zvigadziriso uye maturusi ekunakisa kufinha maburi uye ekunze grooves yezvikamu. Kutenderedza kwemukati nekunze madenderedzwa, uyezve kugaya kwemativi ese maviri kubvisa muganho, uye kuisa hwaro hwegomba rinotevera uye kupedzisa kwegorofu. Iyo inotevera yekupedzisa maitiro ndeyekushandiswa kweakakosha zvigadziriso uye maturusi ekunyatso machining emakomba uye ekunze grooves.
Nekunyatsogadzira machining ezvikamu, kugadzika kwekucheka paramita kwakakosha, izvo zvinokanganisa zvakananga machining iko. Paunenge uchiseta huwandu hwekucheka, zvinodikanwa kuti utarise zvizere zvemhando yepamusoro zvinodiwa zvezvikamu, dhigirii rekupfeka kwechishandiso, uye mutengo wekugadzirisa. Boring inzira yakakosha yerudzi urwu rwekugadzirisa chikamu, uye kumisikidzwa kwemaparamita kwakakosha. Muchigadziro chekubvongodza gomba, huwandu hwakawanda hwekucheka shure hunoshandiswa uye nzira yakaderera-yekucheka inogamuchirwa. Mukuita semi-chaizvo kufinha uye kufinha kwakanaka kwemakomba, shoma shoma yekubata-shure inofanirwa kushandiswa, uye panguva imwecheteyo, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kudzora chiyero chekudya uye kutora nzira dzekucheka-yekukurumidza kuvandudza kugadzirisa kunaka kwechikamu chepamusoro.
Kugadziriswa kweiyo precision disc-shaped porous parts, kushandiswa kwepores hakusi kungotarisa kwekugadzirisa, asiwo kuoma kwekugadzirisa, iyo ine simba rakananga pahutano hwese hwekugadzirisa kwezvikamu. Kuti ive nechokwadi chekugadzirisa kunaka uye kurongeka kwezvikamu zvakadaro, zvinodikanwa kuti usarudze mudziyo wakakodzera wemuchina, kugadzira hurongwa hwesainzi, shandisa yakasarudzika yekusunga, sarudza chishandiso chakakodzera chekucheka, uye kudzora zvakakodzera huwandu hwekucheka. Iwo emuenzaniso zvikamu zvakagadziriswa neiyi tekinoroji yekugadzira zvinosangana nezvinodiwa zvezvikamu, izvo zvinoisa hwaro hwehunotevera huzhinji kugadzirwa uye kugadzirisa, uye zvakare inopa rengedzo nereferensi yekugadziriswa kwezvikamu zvakafanana.